Xisbi Siyaasadeed Cusub oo looga dhawaaqay Magaalada Nairobi (Sawirro) | KEYDMEDIA ONLINE
Xisbi Siyaasadeed Cusub oo looga dhawaaqay Magaalada Nairobi (Sawirro)
Nairobi (Keydmedia) - Munaasabad looga dhawaaqaayay Xisbi Cusub oo ay ku midoobeen Beelaha Jareer Weyne iyo Banaadiri ayaa manta ka dhacday Magaalada Nairobi ee wadanka Kenya.
Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qeyb galay Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Soomaaliya, Oday dhaqameedyo ka socday labada beel, Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Hiiraan State iyo Dadweyne fara badan.
Munaasabadaan ayaa u jeedadeedu aheyd ku dhawaaqidda Xisbi Siyaasadeed Cusub oo ay ku mideeysanyihiin 4 beel oo kala ah: Jareer Weyne, Banaadiri, Baajuun iyo Baraawe.
Xisbigaan ayaa magaciisa uu yahay Somali Peace Part (Spp), waxa uuna hal ku dhigiisu yahay Nabad ku wada noolaasho.
Waxaa goobta Munaasabadda Qudbad kasoo jeediyay Xildhibaan Mowliid Macaane Maxamud oo ku dheeraaday qaabkii loo aasaasay Xisbigaan Cusub, isagoo sheegay in ay ka shaqeynaayaan sidii nabad waarta loogu heli lahaa dhibaatada 20 jirsatay ee ka jirta Soomaaliya.
Waxa uu Xildhibaanku ka codsaday Dowladda Kenya iyo wadamada Dariska ahba in ay taageeraan oo garab istaagaan Xisbigaan ku xardhan ifiiflaalada Nabadda.
Waxa gudoomiye loogu doortay Xisbigaan SPP Mudane Maxamed Cumar Gaarane (Dr.Macaash), oo isagu qudbad dheer ka jeediyay Munaasabadda ku dheeraaday wax qabadka iyo ujeedada laga leeyahay Xisbigaan Cusub.
Waxa uu cadeeyay in ay calaamadoodu tahay (Qoriga dhig ee qalinka qaado), isla markaana ay ugu baaqaayaan Beelaha oo dhan in ay ka shaqeeyaan Nabadda.
Waxa uu cambaareyn kulul dusha kaga tuuray cidii soo fikirtay Nidaamka 4.5 oo ay ku dhisantahay DKMG ah, isagoo sidoo kale Cambaareeyay Dowladda Hadda jirta oo uu ku eedeeyay in ay ku dhaqantay habkaan 4.5-ka ah.
Gudoomiye Xigeekna Xisbigaan SPP Mudane Muumin Cusmaan Cali ayaa isaguna qudbad qiiro leh ka jeediyay Munaasabadda, waxa uuna ku dheeraaday Ahmiyadda ay leedahay in lagu wada Noolaado Nabad.
Waxa uu sheegay Mudane Muumin in ay cafiyeen Dhamaan Beelaha Soomaaliyeed ee dambiga ka galay, sida uu yiri, isla markaana ay diyaar u yihiin iyagu in ka shaqeeyaan sidii wadanka oo dhan Nabad loogu soo dabaali lahaa.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Odayaasha kala ah Malaaq Max’ed Ismaaciil iyo Mahdi C/raxmaan Raajis oo labaduba si guud ugu hambalyeeyay dadkii soo hindisay Xisbigaan xamaarsan Calaamadda Nabadda.
Wasiirka Caafimaadka Maamulka Hiiraan State Mudane C/rashiid Xuseyn Suus oo Xafladda hadal ka jeediyay ayaa sheegay in ay garab taaganyihiin Xisbigaan Cusub ee kusoo biiray masraxa Siyaasadda.
Gudoomiyaha Jaaliyadda SANA Mudane Cumar Abuukar Cumar oo Munaasabadda ka hadlay ayaa isaguna ku baaqay in la tirtiro gabi ahaanba Nidaamka 4.5 oo uu ku tilmaamay in uu yahay mid Cadaalad Darro ah.
Sidoo kale Munaasabadda looga dhawaaqaayay Xisbigaan Cusub ee SPP ayaa waxaa qudbado dareen iyo Xamaasad leh ka jeediyay Xaaji Axmed, Maryan Aweys Jaamac, Ugaas Bashiir Iidow iyo Gudoomiyaha Haweenka Jaaliyadda
Jareer Weyne Marwo Biibi Maxamed Aweys, iyagoo dhamaantood Tilmaamay Muhimadda ay leedahay in nabad lagu wada noolaado.
Intii Xafaladdu ay socotay ayaa waxaa Heeso iyo Majaajiilo wadani ahaa kasoo bandhigay koox Fanaaniin ah oo ay hogaaminaayeen Mxamuud Goox Qarboosh, Xasan Cagaaran iyo Muslimo Qaasim.
Mr: Ibrahim gedow Cawale ( biibbo )